Ukuhambelana kukaLeo: Iimpawu zakho zeZodiac ezifanelekileyo kakhulu, zibekiwe - Usapho
Iimveliso Ngamazwe Uthando Lwezesondo Diy Izixhobo Abaphumeleleyo Umindiya Iindaba Zefashoni Iindlela Impilo
Ukuhambelana kukaLeo: Iimpawu zakho zeZodiac ezifanelekileyo kakhulu, zibekiwe
Ukuzithanda yile nto ingonyama ye-zodiac iyenza kakuhle. Intloko enkulu kakhulu? Okuphikisanayo . Ukuba i-Big Lion Energy imalunga nokufunda ukuba ungazibonisa njani kwaye ube yintshatsheli yakho enkulu, ethi, c'mon, sonke sinokuma ukuba senze okungaphezulu. Abahlobo bethu beengonyama bayalwazi olona thando lwabo lukhulu (yep, uWhitney Houston wayenguLeo), kodwa ngubani oya kuba lelona qabane libalaseleyo? Nantsi inqanaba lethu lokuhambelana ngoku.
Ezinxulumene: Ezona mpawu zihambelanayo zeZodiac zomhlaza, zibekiwe
Le yeyona miqondiso mibini yamandla e-zodiac, emele uxinzelelo phakathi kokufuna ukuthandwa kunye nokufuna ukoyikwa. ILeos ifuna ukuba liziko lokuqwalaselwa (balawulwa lilanga, emva kwayo yonke loo nto), kwaye iiScorpios azinxanelwe ukuvunywa nakubani na. Ngelixa uLeo eza kuhlala emva kwepati ethetha nabantu abanyanzelekileyo, iScorpio sijongile ukuba ngubani na uLeo aqhula naye, bekhumbula ubuso babo kwi-intanethi engenakuphepheka.ukulandelauphando olulandelayo. I-Scorpios kufuneka yazi ukuba ngabo kuphela abalingane babo ngokwenene uyakhathala malunga nokutsala, kwaye ngumyalelo omde kuLeo-ungangowokuqala kuLeo, kodwa baya kuhlala befuna ukubonisa amanani amabini ukuya kwi-100.
Iintlanzi zinobuntununtunu obukhulu kunye ne-intuition ebenza ukuba babekho kwihlabathi liphela kunye neepateni zokungcangcazela thina bantu abangengabo abasePiscean abangakwaziyo ukuzibona (akumangalisi ukuba bachonga njengeemfesane). Okwangoku, iiLeos zininzi ngokwenyani kwaye zikhangela umntu oza kwabelana naye. Yiba nomfanekiso wabo bobabini, esofeni, emva kobusuku obude bokuphupha, ukuncokola. U-Leo unje, Oku kube kuhle, ngaba singaya ngaphandle ngoku? Kwaye iPisces ifana, Ngaphandle yimeko yengqondo. Ininzi into ekufuneka yenziwe nguLeo.
imidlalo emnandi edlalwa ngabantu abadala
Ngelixa iiCancer zixabisile ubuntu obomeleleyo, obubalaseleyo-ngakumbi obukhawulezayo nobunomtsalane njengo-Leo-badinga izaleko kumaleko wobunzulu beemvakalelo ukuze bazive ngathi banokuthemba iqabane. I-Leos ithetha ukuba bathini kwaye bathetha ntoni, ngamanye amaxesha ngaphandle kokujonga uvakalelo olongezelelweyo olufunwa ngumhlaza. Banokuqala kwindawo yothando, kodwa ukuze aba babini badlule kwisigaba seholideyini, ayisiyiyo le nto bayithethayo njengokuba injalo malunga ithoni .
Iinkunzi zeenkomo neengonyama zabelana ngothando olukhulu olukhulu: ubunewunewu kunye nokuzuza. Kodwa iLeos injengezinto ezintle njengesixhobo sokuthathela ingqalelo inkundla, amaTaureans akulo ulonwabo ngokwalo. Bazimele bodwa, ngakumbi kubudlelwane, ngelixa iLeos inxiba iintliziyo zabo kwimikhono yabo. Kwaye kulala apho ukurabha: Ezi zimbini zithanda izinto ezifanayo, kodwa ukugcwala kukaLeo kuhlala kungqubana nobume beTaurus. Indlela iTaurus eyibona ngayo, xa ifumana ulonwabo, akukho sizathu sokuphalaza ezo mfihlelo zorhwebo kwihlabathi liphela. Ngeli xesha uLeo uhamba ngokuzithemba kwakho ngekhe ikopi yentsusa, nokuba uyazama. Zombini zilungile, ezenza kube nzima ukudibanisa le ...
ICapricorn kunye neLeos zombini zimpawu ezibalaseleyo. Kodwa uLeo konke, ndihlala ndinyanisekile kum, izinto ezintle ziya kuwela endaweni, kwaye iCapricorn ifana, Ewe, kodwa sidinga ispredishithi, uqikelelo lweminyaka emihlanu, kwaye kufuneka uziphu ukubhabha. Iza ngokwenene kungquzulwano lwendlela yokuphatha: IiLeos ngookumkani kunye neCapricorn ngoomongameli. Kodwa ukuba iCapricorn iyakhumbula ukuba ngamanye amaxesha isebenza nzima kuthetha ukudlala nzima, kwaye ukuba uLeo angayixabisa indlela yokusebenza ethathayo ukonwabela amawonga abafanele ngokufanelekileyo, ezi alfa zimbini zinokuhlangana.
I-Virgos inokuthi ithambekele ekungeniseni ngaphezu kwengonyama ye-zodiac, kodwa njengabantu abagqibeleleyo baya kuhamba imayile eyongezelelweyo ukubonisa amaqabane abo ukuba bazinikele kangakanani. Okwangoku, uLeos uyathanda ukuba neqhayiya ngabanye babo ababalulekileyo (emva kwayo yonke loo nto, bayimbonakalo yencasa yabo elungileyo), kwaye ngelixa iVirgos inokuba neentloni ngokuzinyusa, uLeos uyakukhwaza esibhakabhakeni malunga nendlela aphumelele ngayo kwaye uqaqambile kwaye ugqibelele kwaye zintle kwaye ziyabaxhasa (njalo njalo). Ngokuqinisekileyo, iiVirgos zenza konke okuziintloni ngolu hlobo lokukhohlisa, kodwa ukuba bayazi ukuba inyanisekile, bayayithanda ngokufihlakeleyo.
Ngelixa i-Aquarius isenokuba yintloko epholileyo ye-Leo esebenzayo, into abelana ngayo kukuthanda kwabo izimvo. Bobabini ama-Aquarians kunye neLeos kakhulu uluvo, enkosi kakhulu , yaye badla ngokunandipha ukutshintshiselana ngezimvo — ingakumbi xa kuthethwa ngezopolitiko. Umngcipheko kuxa bobabini besazi ukuba banyanisile (um, njalo), idabi le-egos linokubakho. Ngethamsanqa ama-Aquarians athambekele ekuthatheni izinto buqu, eziya kuthi zibancede bahambe kwezopolitiko zabo ngelixa befika kwiphepha elinye malunga nabo yangoku ezopolitiko. Ukuba banokwenza oku, abanakuze baphelelwe zizinto abanokuthetha ngazo okanye abazimele.
Iglue ebopha iLibra kunye neLeo kunye incasa elungileyo, sithandwa. Ngokudibeneyo ulwimi lwabo luthando zizinto ezintle ebomini. Oko akupheleli nje ekuchitheni imali eninzi; imalunga nokuzonwabisa ngokuxabiseka kwabo kwendalo kubugcisa, ubuhle kunye nokunethezeka. Nokuba ngaba kuthatha iklasi yokupheka kunye okanye ukukhupha malunga nokwazi yonke i-lyric kuyo Hamilton , akukho kona yenkcubeko aba babini abayi kuyidla kunye. Kwaye ngelixa iLibras inedumela lokungazithembi (abanakukhetha phakathi kwe-ravioli kunye ne-salmon eyojiweyo), uLeos uyonwabile ukunyuka kwaye ayilawule inqanawa. (Bayazi ukuba uyayifuna ngenene i-ravioli.)
Leos fumana Leos. Ngapha koko, ngamanye amaxesha kuphela kwabo ngokwenene baqonde uthando abanalo lokunika. Esi sisibini esiya kukhupha omnye nomnye. Emva kwayo yonke loo nto, uLeo uhlala ezabalazela ukwazi oyena mntu, ungasemva kwee-Instagram ezenziwe kakuhle (akukho Gatsbying apha, abantu). Aba babini baya kutyhalelana ukuze babamkele ukuba bangobani, hayi kuphela abo bacinga ukuba kufanele ukuba babe ngabo. Kodwa kuya kubakho iiselfie ezininzi, nazo-zona are Leos.
Umama ucaphula umhlobo osenyongweni wentombi
Zi-duo ezingenantloko, kodwa zihlala zikwinqanaba elifanayo. Njengeempawu zomlilo, uAries noLeo bobabini bathanda imiboniso emikhulu yothando, kwaye bayayihlonipha enye indlela yokufumana uthando kwezothando. Musa ukulindela iiyure ezingama-72 zokuthumela imiyalezo engacacanga phambi komhla wesibini kwikhalenda okanye nakuphi na ukujikeleza okungenasiphelo sokwenyani. Ii-Aries zihamba ngokukhawuleza xa zithanda umntu, kwaye masithi iiLeos azivulwanga ngobuqhetseba ....
I-chemistry ebonakalayo phakathi kwe-Sagittarius kunye ne-Leo ishushu-iitshathi zishushu. Ezi zimbini zifana nokubuyisa iGolide: amandla amaninzi kunye nothando lwekinetic. Oko kuthetha ukuba umlo omncinci epakini (wonke umntu angarhola amehlo, kodwa kuyonwabisa), ukukhwela amahashe (I-Sagittarius yi-centaur, emva kwayo yonke loo nto), izifundo zomdlalo wamanqindi, i-yoga eshushu kwaye, um, uninzi lwesini, i-natch. Xa bathi ekugqibeleni babambe umphefumlo wabo, ezi zibini zabelana ngombono wethemba kunye nokuxabisa incoko emnandi. Kwaye loo nto inethamsanqa kuba ii-Sagittarians zenzeka ku… thanda ... ku ... thetha.
Le yinto encinci yokukhetha ngesibindi, kuba ukuhambelana kwe-zodiac kuhlala kumiselwa yinto yokuqala (imiqondiso yomlilo ihlala # 1 yezinye iimpawu zomlilo, njalo njalo). Kodwa musa ukulala kumlingo wokudityaniswa kophawu lomoya iGeminis kunye nomqondiso womlilo weLeos. I-Geminis iyathandeka, i-flirty kwaye ihlakaniphile. Ngapha koko, abanangxaki ngokuvumela amaqabane abo ukuba akhokele. I-charisma yendalo ka-Leo kunye namandla angabamba iwele elijikelezayo. Aba babini bancinci ngentliziyo kwaye banomdla, ke lindela imihla naphina ekuhloleni ipaki yolonwabo eyalahliweyo ukuya kubusuku eMet.
UKiki O'Keeffe ngumbhali ngeenkwenkwezi eBrooklyn. Unokulandela incwadana yakhe, Andikholelwa kubugqi , okanye yena Twitter kwaye Phakathi @alexkiki.
Izigaba Iiresiphi Kwiindaba Unyango Lwasekhaya
Ezona bhanyabhanya zithandekayo zehollywood zothando
iinwele ezisikwe ubuso obude
Izimvo zephathi yokuzalwa yama-50
ukuzilolonga ukunciphisa amanqatha esisu ngokukhawuleza ekhaya
iikowuti ezibuyela esikolweni
yeyiphi ishampu ethambileyo